पुनर्बिमा - बिदेसिने अर्बौ रकम रोकिन्‍छ - Khabar Japan - News in Nepali
तपाई यहा हुनुहुन्छ » ख़बर जापान / नसोधिएको प्रश्न / पुनर्बिमा – बिदेसिने अर्बौ रकम रोकिन्‍छ
पुनर्बिमा – बिदेसिने अर्बौ रकम रोकिन्‍छ
Tags: bima, bimanepal, insurancenepal, rameshlamsal, reinsurance, reinsurancenepalcompany
खबरडेस्क, ७ माघ ।
नेपालमा पहिलो पटक सोमवारदेखि पुर्नबिमा कम्पनी सञ्चालनमा आउँदै छ। सरकारले आकस्मिक बिमा कोषलाई नेपाल पुर्नबिमा कम्पनी लिमिटेडमा परवर्तित गरी सञ्चालन गर्ने भएपछि पुर्नबिमा कम्पनी सञ्चालनमा आउन लागेको हो।
पहिलो पटक सञ्चालन हुन लागेको पुर्नबिमा कम्पनीको नेतृत्व आकस्मिक बिमा कोषका प्रमुख रमेश लम्सालले गरेका छन्। बिमा क्षेत्रमा २० वर्षको अनुभव भएका लम्सालसँग पुर्नबिमा कम्पनीको योजना तथा नेपालमा बिमा व्यवसायको सम्भावनाको विषयमा रहेर अन्‍नपूर्णको लागि आशीष ज्ञवालीले गरेको कुराकानी
पहिलो पटक नेपालमा पुर्नबिमा कम्पनी सञ्चालन हुँदै छ। यसको तयारी कस्तो छ?
पहिलो पटक नेपालमा पुर्नबिमा कम्पनी सञ्चालन हुन लागेको छ। नेपालमा अहिलेसम्म पुर्नबिमा कम्पनी नहुँदा वर्षेनी अर्बौ रकम बाहिरिने गरेको छ। नेपालमा लामो समयदेखि पुर्नबिमा कम्पनीको आवश्यक्ता महशुस गरिएको थियो।
लामो समयको छलफलपछि सरकारले आकस्मिक बिमा कोषलाई पुर्नबिमा कम्पनीमा परिणत गर्ने निर्णय गरेको छ। अहिले पुर्नबिमा कम्पनी लिमिटेडको चुक्ता पुँजी दुई अर्ब १० करोड तथा जारी पुँजी तीन अर्ब र अधिकृत पुँजी पाँच अर्ब रहेको छ।
जसमा सरकार तथा बिमा कम्पनीको लगानी रहेको छ। नेपालमा नयाँ कम्पनी भएको हुनाले सञ्चालनका प्रारम्भिक चरणका मात्र तयारी भएको छ।
क्षती हुँदा करोडौ रकम तिनुपर्ने हुँदा दुई अर्ब चुक्ता पुँजी कमी भएन?
कम्पनीको पुँजी अहिलेको लागि दुई अर्ब हो। तीन अर्ब पुँजी हामीले केही समय भित्रमा पु:याउने छौ। व्यवसाय र बजारको आकार बढ्दै गएपछि कम्पनीको पुँजी स्वभाविक रुपले बढ्दै जान्छ।
अहिले हाम्रो क म्पनी प्रारम्भिक अवस्थामा रहेको हुनाले दुई अर्ब रुपैयाँ पुँजीले व्यवसाय गर्न पुग्छ। व्यवसाय आकार बढ्दै गएसँगै पुँजीको आकारपनि बढ्दै जाने छ।
समग्र बिमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तीको अभाव भएको अवस्थामा पुर्नबिमा कम्पनी सञ्चालन कत्तिको समस्या छ?
बिमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तीको अहिलेपनि अभाव रहेको छ। नेपालमा २००४ सालदेखि बिमा व्यवसाय शुरु भयो। २०२४ सालमा आएपछि राष्ट्रिय बिमा संस्थान गठन भयो।
काम गर्दै जादा जनशक्ती दक्ष बन्दै जाने हो। नेपालमा पुर्नबिमा कम्पनीको स्थापना भएर कम्पनी सञ्चालनको प्रारम्भिक प्रक्रिया मात्र शुरु भएको छ। काम गर्दै गएपछि कर्मचारी हरु दक्ष बन्दै जान्छन् यसले ठूलो समस्या पार्दैन।
विश्वमा ठूला भनिएका पुर्नबिमा कम्पनीपनि टाट पल्टेको अवस्थामा पुर्नबिमा कम्पनी जोखिमको व्यवसाय होइन?
अन्य व्यवसाय भन्दा पुर्नबिमाको व्यवसाय संवेदनशिल हो। बिमा क्षेत्रमा जिवन र निर्जिवन बिमा कम्पनीले विभिन्न प्रकारका बिमा गरेका हुन्छन्। जसमा तुलनात्मक रुपमा जिवन बिमाको तुलनामा निर्जिवन बिमा अन्तर्गतको हवाईबिमा बढी संवेदनशिल हुन्छ।
त्यही कारणले अन्य बिमा पोलिसीको तुलनामा हवाई बिमामा कम्पनीले ०.१ प्रतिशत मात्र जोखिम बहन गरेर अरु सबै जोखिम पुर्नबिमा कम्पनीमा सारेका हुन्छन्। सन् २००१ मा अमेरिकामा भएको आक्रमणपछि धेरै ठूला पुर्नबिमा कम्पनी समस्यामा परेकापनि थिए। तर,हामीले अहिले तत्कालै ठूलो परिणामको बिमा कम्पनीको पुर्नबिमा नगर्ने भएकोले ठूलो समस्या आउने सम्भावना हुँदैन।
व्यवसाय बढाउनको लागि कम्पनीले कस्तो योजना बनाएको छ ?
सरकारले कात्तिक २३ गते पुर्नबिमा कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेपछि अहिले कम्पनीको सञ्चालन समितिले विभिन्न प्रकारका उपसमिति गठन गरेको छ। जसमा व्यवसायिक बढाउने योजनापनि समावेश रहेको रहेको छ।
हामीले तीन चरणमा गरेर कम्पनीको व्यवसाय बढाउने योजना बनाएका छौ। अल्पकालिन चरणमा हामीले कम्पनीको सञ्चालन प्रक्रिया देखि लिएर दुई वर्षसम्ममा पुर्नबिमाको लागि जाने २० प्रतिशतसम्म रोक्ने रणनीति छ।
दोस्रो चरणमा हामीले दुईवर्षदेखि पाँचवर्षसम्ममा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवसायको नीति बनाउने छौ। पाँचवर्षदेखि माथी व्यवसायको आकार बढाउने दीर्घकालिन नीति बन्ने छ। कम्पनीले चरणबद्ध रुपमा व्यवसाय बढाउने नीति लिने हो। कम्पनी सञ्चालनमा आएको अर्को महिनादेखि पूर्ण रुपमा पुर्नबिमाको लागि बाहिरिने रकम रोकिने होइन।
खुला बजार अर्थतन्त्रमा नेपाली बिमा कम्पनीले यही पुर्नबिमा गर्छन् भन्ने आधार देखिएन ?
पुर्नबिमा कम्पनीको ग्राहकपनि बिमा कम्पनी र मालिकपनि बिमा कम्पनी हुन्। कम्पनीलाई कसरी व्यवसाय दिने भन्ने विषय बिमा कम्पनीको पनि रहेको हुनाले त्यो विषय उहाँहरुले पनि सोच्ने कुरा हो।
अर्को बिमा कम्पनीले गर्ने सबै पुर्नबिमा नेपालबाट हुन्छ भन्ने हुँदैन। बिमा व्यवसाय जोखिम न्यूनिकरण र सबैलाई बाढ्दै जाने हो। एउटै कम्पनीले सबै जोखिम बहन गर्नपनि सक्दैन। कम्म्पनीको लगानीकर्तापनि बिमा कम्पनी भएको हुनाले व्यवसाय आउनेमा हामी विस्वस्त रहेका छौ।
विदेशबाट पुर्नबिमाको व्यवसाय ल्याउनेमा कस्तो सोचाई बनाउनु भएको छ ?
विदेशबाट पुर्नबिमाको व्यवसाय ल्याउने हाम्रो दीर्घकालिन सोचाई हो। हामीले पाँच वर्षपछि विदेशी बिमा कम्पनीबाट पुर्नबिमाको व्यवसाय ल्याउने सोचाई बनाएका छौ।
पहिलो चरणमा सार्क देशका बिमा कम्पनीबाट पुर्नबिमाको व्यवसाय लिने र त्यसपछि अन्य एशियाली मुलुकको व्यवसाय लिने योजना हो। तर,अहिले हामी प्रारम्भिक चरणमा भएको हुनाले विदेशको व्यवसायभन्दा पनि पहिलो प्राथमिकता स्वदेशी बिमा कम्पनीको पुर्नबिमाको व्यवसाय गर्ने प्राथमिकता हो।
पुर्नबिमा कम्पनी स्थापना भएपनि अझैपनि बिमा व्यवसाय नेपालमा प्रारम्भिक चरणमा मात्र छ किन ?
नेपाल बैंकभन्दा अहिलेको नेपाल इन्सुरेन्स १० वर्षपछि स्थापना भएको हो। बैंकभन्दा १० वर्ष पछाडी स्थापना भएपनि नेपालमा बिमा व्यवसायको विस्तार अझै हुन सकेको छैन। अहिले २६ वटा बिमा कम्पनी सञ्चालन भएपनि तोकिएको ठाउँसम्म जान नसकेकोपनि साचो हो।
खासगरी बिमाको महत्व विगतमा राज्यलेपनि नदेखेको कारण बिमाको बजार विस्तार हुन नसकेको हो। तर,अहिले सरकार तथा बिमा समितिले बिमाको विषय प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। अहिले कृषि बिमा अनिवार्य भएको छ।
जसले बिमा कम्पनीहरु ग्रामिण क्षेत्रमा गएर व्यवसाय गर्न थालेका छन्। परम्रागत बिमा बजारको मानसिकताबाट बिमा कम्पनीहरु अहिले माथी आएका छन्। बजार बढ्ने क्रममा रहेको छ।
- अन्नपुर्ण पोस्ट बाट